YAANYO "AURIA": SHARAXAAD IYO DABEECADAHA KALA DUWAN, QAABABKA BEERASHADA, SAWIR - NOOCYO YAANYO
Yaanyo "Auria": sharaxaad, beeran iyo daryeel
Tamaandho "Auria" waa noocyo of haleelidda hiwaayadda, kuwaas oo aan lagu soo galay diiwaanka gobolka, laakiin horay u maareeyay si ay u helaan caan ka mid ah ballaaran ee bannaanka u. Kala duwanaantani waxay ku fiican tahay inay sii kordhiso kuwa caato-doonka ah ee doonaya in ay ku beertaan goobahooda ay khudradda cagaaran iyo kuwa aan caadiga ahayn. Waxay leeyihiin muuqaal aan caadi aheyn oo si dhab ah u la yaabi doona oo kaliya dariska, laakiin sidoo kale guriga. Next, waxaan ku siin sharaxaad faahfaahsan iyo sharaxaad kala duwan ee yaanyada "Auria".
Kala duwan ee la yiraahdo yaanyada waxay badiyaa bixiyaan wax wanaagsan. Waxaa lagu gartaa caqli-gal ah, taas oo ah, ma jirto wax xaddidan dabiiciga ah ee koritaanka. Xidhanka dhirta waa liana-qaabeeya, waxay kori kartaa ilaa laba mitir oo dherer ah, sidaas darteed hubi inaad xirto dhirta, iyo sidoo kale pasyonka, oo sameysma kaliya 1-2 afkoda.
Waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan noocyada kala duwan ee yaanyada sida "Alsu", "Babushkino", "Madeira", "Labrador", "Pink Flamingo", "Black Moor", "Mazarini", "Korneevsky", "Pink Bush", "Rio Fuego" , "Blagovest", "Mansion Faransiis", "Abakansky pink", "Labrador".
Caleemaha dhaqanka yaanyo waxay leeyihiin midab khafiif ah oo cagaaran, taas oo aan isbeddelin ilaa xilliga dayrta. Qaabka caleemaha waa mid caadi ah, laakiin waxoogaa ka yar sidii caadiga ahayd. Masaafada u dhaxaysa burushyada waa mid aad u weyn, taas oo siin karta aragti ah sariir caleen ah oo yar.
Caleemaha of this khudradda aan caadi ahayn waa daciif, sidaas darteed Taageerida aad u baahan tahay inaad soo qaadatid xoog awood leh. Intaa waxaa dheer, qiyaastii daraasadood oo waaweyn ayaa midba midka kale u sameysan karaa, sidaas awgeed waa muhiim in la hubiyo in afkoda geedka aan waxyeello culeyskooda.
Ma taqaanaa? Karl Linnae, oo ah khabiir dabiici ah oo Sweden ka yimid, oo magac siiyay dhirro badan, waxay siisay magaca iyo yaanyada. Markaasuu u yeedhay "Lycopersicum Solanum"taas oo tarjumaysa sida "feeraha yaryar".
Kala duwan yaanyo "Auria" waa mid miro dhal ah. Midhaha miraha waa mid yar laakiin waxay ku koraan burushyada, samaynta ilaa 20 yaanyo mid kasta. Waa xilli-dhexaad. Laga bilaabo bilowga geedo si ay u bislaadaan dalagga, waxaad u baahan doontaa inaad sugto ilaa 100-110 maalmood.
Muuqaal muuqaal ah oo kala duwan oo tamaandhadan ah oo ka mid ah dadka kale waa qaabka ay u egtahay mid aan caadi ahayn, oo leh wax yar oo la fiiqay. Waxay sheegaan in ay tahay sababta foomkan oo ku yaala liisaska qaar ka mid ah ay ku imaan karaan magacyada "Mudanayaal Maydhey", "Eros", "Adam" iyo qaar kale, laakiin waxay noqon doontaa wax ku saabsan noocyo kala duwan oo yaanyo ah "Auria".
Marka bislaado, midhaha ayaa noqda casaan casri ah, waxay miisaankoodu yahay 100-150 g. Dhererka miro waxay ku kala duwanaan kartaa 12-14 cm. Tamaandhadu waxay leedahay saxarad cufan, waxay yihiin kuwo aad u dhadhan fiican leh, ugxan leh, abuurka gudaha waa kuwo yar. Khudradda noocan oo kale ahi waxay ku fiican tahay cunista cusub, iyo sidoo kale daaweynta iyo ilaalinta.
Sida laga soo xigtay dib u eegista ee bannaanka u, kala duwan tani ma laha dhibco weyn. Ma waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u xirto si tartiib ah, si aanay u waxyeeleynin geedka. Laakiin tayada wanaagsani waxaa loo yaqaan karaa wax badan:
Soo saarista wax-soosaarka sare. Tamaandho waxay ku koraan rucubood oo ah 7-10 gogo '. Waxaa jira kooxo badan oo kuwan ka mid ah, kuwaas oo kuu ogolaanaya inaad ururiso qadar miro badan.
Kala duwanaanshaha isticmaalka dalagga. Koraaya dhaqanka yaanyo waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku raaxaysato dhadhanka khudaarta xagaaga, iyo sidoo kale diyaarinta jiilaalka.
Cadaadiska cudurada. Warshadani aad ayey u yar tahay cudurada.
Tamaandhada ha ku xoqin ama xadidnayn, taas oo u ogolaanaysa in lagu kaydiyo waqti dheer.
Miraha dhirta muddo dheer.
Dhammaan yaanyada waxay u koraan in ka badan ama ka yar cabbirka isku mid ah. Nuqullada yaryar iyo qaababka badanaaba maaha.
Tamaandho ah noocyo kala duwan oo si buuxda u rushaynaya iyo u adkeyn kuleylka.
Dhadhamin aad u fiican, iyo sidoo kale dhadhanka yaanyo.
Ma taqaanaa? Koonfurta Ameerika waxaa loo tixgeliyaa halka uu ku dhashay ee yaanyada. Halkaasi waa mid weli laga heli karo noocyada dhaqdhaqaaqa ah ee dhaqdhaqaaqa ah ee noocaan ah ee warshadda.
Waxaa haboon in la ogaado in kasta oo koritaanka sare ee duurka ee noocyo yaanyo "Auria", waxay yihiin raaxo iyo is haysta ee daryeelkooda.
Diyaarinta ciidda for abuurka yaanyo
Si aad u fuliso beereedka yaanyada, waxaad isticmaali kartaa diyaargarow pre-iibka ka hor. Laakiin bannaanka u badan oo doortay diyaarinta ciidda u gaar ah.
Ujeedadaas awgeed, waxaad qaadan kartaa halabuurka ciidda iyo humus (1: 1) oo ku dar in isku dar ah buugta yar. Kala duwanaansho kale oo ka kooban halabuurka dhulka waxaa laga sameeyey humus, peat iyo dhulka, kuwaas oo sidoo kale loo qaaday qaybo siman. Waxa kale oo aad ku dari kartaa superphosphate, HOL iyo potassium sulfate ilaa ay isku dar ah.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad abuurto geedo beeri ah geedo. Nidaamkan noocan oo kale ah waxaa la qaadaa qiyaastii laba bilood ka hor inta aan loo wareejin dhirta loogu talagalay dhirta si joogto ah. Inta badan, marxaladan waxaa la qabtaa Febraayo, ama maalmaha ugu horreeya bisha Maarso, sidaa daraadeed tobanka sano ee la soo dhaafay ee April, waxaa suurtagal ahayd in loo wareejiyo geedo si loo furo dhulka. Tani waa tan sidan oo kale:
First of dhan, miraha waa in si wanaagsan loo diyaariyey. Waxay u baahan yihiin in la dhigo 30 daqiiqo xal nalka ah ee daloolka potassium, taas oo jeermiska abuuri doonaa. Ka dibna waxaad u baahan tahay inaad biyo raaci karto abuurka oo aad uga tagto muddo yar biyo cad, si ay u bararaan.
Ka dib markaa, waxaad bilaabi kartaa abuurka shinnirada loogu talagalay geedo. Dhulka waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto godad, qoto dheer oo ka duwan 5 ilaa 7 mm. Inta u dhaxaysa godadka waxaa muhiim ah in la fogaado 2-3 cm Haddii weelku u qaybsan yihiin qaybaha, ka dibna hal ama laba xabo ayaa ku filan in la dhigo mid kasta.
Dhamaadka hawsha, ku dabool weelasha leh filim si aad u abuurto saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo. Waxaa lagu talinayaa in lagu rakibo weelasha qolalka si fiican u iftiimiya, halkaas oo heerkulka sare lagu hayo, qiyaastii +24 ° C. Biyaha geedo ku on geedo waa in kaliya marka dhulku engegay.
Caleemaha ugu horeeya waxaa la arkaa 7-8 maalmood kadib. Marxaladani waxay horay u suurtogali kartaa in lagu wareejiyo weelasha leh geedo ilaa meel heerkul hoose leh. + 18 ° S waxay noqon doontaa mid ku filan. Xulashada ugu wanaagsan waxay noqon kartaa xayndaabka daaqadda ee caadiga ah. Quudinta leh arimaha organic waa in la fuliyaa ka dib markii labada caleemood ee hore loo sameeyay on geedka. Ku haboon ujeeddadaas humus.
Marxaladda marka dhirta ay sameeyaan saddex-caleemood oo caleemo ah, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado picking iyo tallaal geedo ku shub weelasha waaweyn. Marxaladdan, dhirta ayaa u baahan doonta mar kale inay helaan kuleyl badan, markaa heerkulka + 20 ... +25 ° C waxay u baahnaan doontaa in la daaweeyo illaa 4 maalmood, ka dib markii weelasha lagu soo celin doono habka caadiga ah.
Inta lagu jiro maalmahaas, xididada waxay yeelan doonaan waqti ay ku degaan, iyo geedo si fiican u koraan weelasha illaa daqiiqadda markaa lagu dhex beeri doono ciidda furan ama lagu koriyo.
Qalabaynta dhul furan
Waa arrin aad u muhiim ah in la doorto meesha saxda ah ee beerta loogu talagalay beerista yaanyada Auria halkaas, sababtoo ah dalagga in la goyn karo natiijada si toos ah ayey ugu xiran tahay tan. Goobta waxaa lagula talinayaa inay doortaan qaybta sare ee beerta, sidaas darteed waxaa laga ilaaliyaa habka dabaysha si lama filaan ah.
Waa muhiim! Xulasho aad u fiican wuxuu noqon lahaa beerista yaanyada ee aagga meesha xididada hore loo koray, marka laga reebo baradho, digir ama salad.
Sariirta waxaa lagula talinayaa inay bacrimiso arimaha bakeeriga. Ku filan hal baaldi oo ah digada halkii mitir labajibbaaran oo dhul ah. Geedo beereed waa in ay ahaadaan maalmaha ugu horeeya ee Juun. Laakiin haddii aad dhisto aqalka dhirta lagu koriyo, oo daboolaya filimka dhaqanka, waxaa loo ogolyahay in la fuliyo nidaamkaas tobankii sano ee la soo dhaafay.
Ceelasha waa in lagu dhajiyaa fogaan ah 30 ilaa 70 cm midba midka kale. In kasta oo iyaga ka mid ah, waa in aad marka hore ku shub qadar yar oo xal of KP, kaas oo ka caawin doona in jeermiska ciidda iyo yareeyo dhirta yaanyo ka soo cudurada mustaqbalka.
Next waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh uga saarto geedo of yaanyo ka soo weelasha ay weheliyaan clod iyo dun meel godka. Daadi geedo dhulka ilaa caleemaha kowaad.
Waa muhiim! Xayawaanku waxay u baahan yihiin inay horey u xidhaan. Taageeradu waxay u baahan doontaa mid sare oo awood leh. Isla markiiba beerashada, yaanyada waa in aan la waraabin. Qoyaanka qoyaanka waxaa la sameeyaa kaliya dhowr toddobaad kadib.
Noocyada kala duwan ee yaanyada "Auria" uma baahna xirfado gaar ah ninkii beerta ka shaqaynayay si uu u daryeelo dalagyada khudradda. Waqti ku filan si aad u fuliso dhirta iyo dhirta pasynkovanie. Marka duurka u gaaro height ee loo baahan yahay, waxaa lagama maarmaan ah in la xoqo dushooda dhirta.
Sidan, waxaa suurtogal ah in lagu gaaro qaybinta saxda ah ee nafaqooyinka taas oo loogu talagalay horumarinta miraha, iyo ma aha waraaqo. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la isku xidho miraha khudradda, sababta oo ah waa mid aad u sareysa.
Waraabinta yaanyada ayaa u baahan joogtada ah iyo labiska laakiin dhexdhexaad ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero xaaladda xayawaanka iyo qoyaan sida loo baahan yahay. Ka dib abaarta, ma aha lagama maarmaan in la waraabiyo dalagga si aad u badan, waxaa fiican in la qoyno qoyaan laba nidaam. Haddii cimiladu ay daruuri tahay, waxay ku filnaan doontaa in la bilaabo 2 litir oo biyo ah toddobaadkii hal kaynta kasta. Haddii xaaladuhu ay badan yihiin qoraxda iyo kuleylka, markaa waxaad yareeyn kartaa yaanyada laba jeer toddobaadkii.
Waa muhiim! Waraabinta xad dhaafka ah ee ciidda ma aha mid macquul ah, sababtoo ah tani waxay dhalin kartaa carqaladaynta nidaamka xididka geedka.
Dusha sarreeya ee noocyada kala duwan ee tamaandhada ah waxaa fuliya bacriminta adag ee macdanta, iyo sidoo kale kuwa ay ku jiraan potassium iyo nitrogen.
Quudinta ugu horeysa waa la samayn karaa 10-12 maalmood ka dib markii dhirta lagu beeray ciidda furan. Waxaad u baahan tahay inaad diyaariso isku-dar ah organics iyo macdan. Tusaale ahaan, waxaad qaadan kartaa 10 litir oo mullein ah oo biyo lagu darey oo ku dar 20 garaam oo superfosphate ah. Miisaankani wuxuu ku filnaan doonaa inuu ku quudiyo 10 busha oo yaanyo ah.
Quudinta ku xigta waxaa la sameeyaa 2 iyo 4 wiig ka dib marka ugu horeysa. Waxaad bacrimin kartaa ciidda leh bacriminta qalalan ee superphosphate (20 g halkii 1 sq. M), amooniyam ammonium (10 g halkii 1 sq m) iyo cusbo potassium (15 g halkii 1 sq. M). Kadib sameynta noocaan oo kale ah waxaad u baahan tahay inaad sariirta jebiso oo ku shub biyo nadiif ah.
Guud ahaan, noocyo kala duwan oo Auria ah ayaa marar dhif ah laga qaadaa cudurada fangaska. Laakiin on site, marka lagu daro yaanyada, kuwa kale, khudaarta yar u adkaysta koraan, iyo nooca cudurka, sida la og yahay, awood u faafidda. Sidaa darteed ha iloobin inaad kormeerto dhaqanka yaanyo maalin kasta.
Kala duwanaanta la tixgeliyaa waxay u adkaysantaa cudurada, laakiin waxaad ka takhalusi kartaa dulinada waxyeellada leh cayayaanka. Gaar ahaan, diyaarinta Aktara, Regent, Lightning iyo Taboo waxay gacan ka geysan doontaa in la burburiyo jiritaanka baradiidka Colorado.
Guud ahaan, koritaanka iyo daryeellidda dhaqanka noocan oo kale ah waa mid sahlan oo xitaa xiiso leh. Tamaandho "Auria" waxay leedahay faa'iidooyin badan, mid ka mid ah waa midho dhalid badan. Haddii uu jiro rabitaan, markaa hubaal waa inaad isku daydaa inaad degto sida khudradda asalka ah ee beertaada.